Israely : Ny savorovoro tao amin’ny seranampiaramanidina sy ny “Carlamania” nandritra ny fitsidihan’i Nicolas Sarkozy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2019 17:41 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka ny Jona 2008)
Nirefotra ny poa-basy raha niala ny seranampiaramanidin'i Ben Gourion tao Israely ny Filoha Nicolas Sarkozy. Fantatra tamin'ny fanadihadiana maika natao fa nitifi-tena ny iray tamin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa mpiaro ny Filoha Sarkozy, angamba namono tena.
Telopolo taona mahery ilay niharam-boina, ny anarany moa tsy navoaka noho ny fangatahan'ny fianakaviany, ary mpiambina nandritra ny valo taona taorian'ny fanafahana azy tao amin'ny Mpitandro Filaminana Israelianina. Tanatin'ny vondrompiarahamonina druze izy.
Nitranga io loza io taorian'ny fitsidihan'ny Filoha Sarkozy sy ny vadiny Carla Bruni-Sarkozy an'i Israely, izay naharitra telo andro. Tao amin'io firenena io, nanao lahateny teo anoloan'ny Knesset, parlemanta Israelianina, i Sarkozy, izay nitsikeràny ny fananganana zanatany, niangaviany Jerosalema mitambatra ho renivohitr'i Israely sy Palestina, ary namerenany nanamafy ny fanolorantenan'i Frantsa hiaro an'i Israely.
Nandritra ny fitsidihany, nihaona tamin'ny Filoha Mahmoud Abbas ihany koa i Sarkozy ary nankany Cisjordanie, rehefa avy nihaona tamin'ireo Arabo mpitondra an'i Syria sy Libanona tany amin'ny voalohandohan'ny herinandro tany.
Voavaky tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Israelianina
Mampitaha ireo lahateny tao amin'ny Knesset nataon'ireo filoha Frantsay Sarkozy sy Amerikana George W nandritra ny fitsidihany tamin'ny volana lasa teo (Sary: Wikimedia Commons teo ambany fahazoandalana Creative Commons) i Daniel Levy avy ao amin'ny blog Perspectives de paix (teny anglisy), sy talen'ny Initiative de Perspectives de Paix ao amin'ny fikambanana Century.
“Filoha roa, lahateny roa, mpitarika iray :
– Ny Filoha Bush miresaka momba ireo sisintany ho ana vahaolana iray mahafaoka ireo Fanjakana roa :________
– Ny Filoha Sarkozy: “tsy hisy mihitsy ny fandriampahalemana raha tsy misy sisintanim-paritra mipetraka eo amin'ireo tsipiky ny 1967 miaraka aminà fifanakalozam-paritra.”
– Ny Filoha Bush miresaka momba ireo zanatany: __________
– Ny Filoha Sarkozy : “Tsy azo tanterahina ny fandriampahalemana raha tsy atsahatra tanteraka ary izao dieny izao ny fanjanahantany”
– Ny Filoha Bush miresaka momba ny toerana misy an'i Jerosalema: _______
– Ny Filoha Sarkozy : “Tsy azo tanterahina ny fandriampahalemana raha tsy ekena ho renivohitr'ireo Fanjakana roa ireo i Jerosalema sy azo antoka ny fahalalahana hiditra amin'ireo toerana masina ho an'ireo finoana rehetra.
– Ny Filoha Bush miresaka momba ny olan'ireo mpitsoaponenana Palestiniana :_____________
– Ny Filoha Sarkozy : “Tsy azo tanterahina ny fandriampahalemana raha tsy voavaha ny olan'ireo mpitsoaponenana Palestiniana, anatin'ny fanajàna ny maha-izy azy an'i Israely sy ny antom-pisiany.”
– Ny Filoha Bush miresaka momba ireo lahatenim-pihavanana Israelianina-Palestiniana, Israelianina-Siriana na Israelianina-Libaney :__________
– Ny Filoha Sarkozy : “Vonona ny hikarakara eto amin'ny taniny ireo adihevitra rehetra mitondra mankany amin'ny fandriampahalemana i Frantsa, na ireo fifanarahan'ny Israelianina-Palestiniana izany, na ny resaka Syriana-Israelianina, na ireo resaka mila tohizana, antenaiko indray andro any, eo amin'i Israely sy i Libanona.”
Tsy dia liana tamin'ilay lafiny politikan'ny fitsidihan'i Sarkozy ireo bilaogera sasany fa kosa tamin'ireo endrika nisehoany. Nisarika manokana ny mason'ireo mpanaogazety-olompirenena Israelianina, izay mankasitraka azy hatrany, i Carla Bruni, vady fahatelon'ny Filoha, mpihira ary mpilatro.
Manao izao fandinihana izao ny Simply Jews (teny anglisy):
“Toa arahinà filoha frantsay, Nicolas Sarkozy, i Carla Bruni… Ireo vokatra naterak'ity hetsika tsy fahita firy ity teo nóho eo:
1) Nanemotra ny fanambaràna nendrasana hataon'ny governemanta momba ny haintany sy ireo fepetra hentitra hitsitsiana rano ny haben'ny raraka ivy navoakan'ireo mpakasary miafina, mpanaogazety, manampahefana sy ireo lehilahy Israelianina amin'ny ankapobeny.
2) Nahemotra amin'ny fotoana tsy fantatra na mandra-piandry baiko vaovao ny fanafihana ireo toby nocleary iraniana, ny fananihambohatra an'i Gaza, ny fanapahandohan'ny Hezbollah, sy ireo hetsika fanaovana herisetra hafa mahazatra avy amin'ny Sionista.
3) Hita nanao paompy 90 tao amin'ny efitra fandraisana VIP-n'ny seranampiaramanidin'i Ben-Gourion i Shimon Peres, i Carla sy ireo mpanampy azy ireo kosa manisa, raha nanala ny saron'ny Dom Pérignon ny sasany tao afara.”
Manampy ny Simply News i Dion Nissenbaum avy ao amin'ny bilaogy Checkpoint Jerusalem ho fiarahabana ny fahatongavan-dRtoa Bruni :
“Nahatratra an'i Israely ny Carlamania. Rehefa avy nambabo ireo Britanika tamin'ny volana Martsa sy nahazo fankasitrahana feno doka avy amin'ny Filoha Bush tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, dia mitondra ny hatsaràny aty Jesoralema indray i Carla Bruni-Sarkozy, mpihira lavorary sy mpilatro nahita fahombiazana izay antsoina indraindray hoe Ramatoa voalohan'i Frantsa. Misy gazetiboky frantsay iray miantso azy hoe “ilay Filoha”.
Miezaka mamorona hetsika any amin'izay misy azy kosa ny vadiny, ny Filoha Tsy-Haikohaiko.”
Manao tsikera maloka momba ny andraikitr'i Rtoa Bruni tanatin'ilay fifampitifirana ny Israelity Bites (teny anglisy).
” Nisy nivazivazy ny sasany nilaza fa saika nitolefika ilay mpiambina rehefa niezaka mafy ny hitazana an-dRtoa Carla, ilay ramatoa voalohan'i Frantsa, izay mahajambena ny vahoaka toy ny fanaon'i Jackie Kennedy. Nilaza ny Radio Israël fa 100 na 200 metatra miala avy eo no nisy ilay miaramila voatifitra. Nisy vehivavy miaramila roa nanatri-maso ilay fifampitifirana nandray fitsaboana noho ny dona mafy ara-tsaina nahazo azy ireo, hoy ihany ilay onjampeo.
Nilaza ny sampana mpitsabo mpirotsaka an-tsitrapo israeliana, Zaka, fa toa namono tena ilay miaramila. Kanefa araka ireo tatitra nataon'ny haino amanjery hafa dia mety fanina noho ny hafanana izy, ka nanapoaka tsy nahy ny basiny.”
Lahatsoratra hafa ato amin'ny Global Voices (teny anglisy) mikasika ireo fitsidihana farany nataon'ireo Filoham-panjakana tao Israely
– Mivadika Maitso miaraka amin'i Gore (Mey 2008)
– Fitsidihana farany ataon'i Bush amin'ny maha Filoha azy (Mey 2008)
– Inona no ataon'i Carter ao Afovoany Atsinanana ? (Aprily 2008)
- Mitsidika an'i Israely ny Filoha (Janoary 2008)
ary ny :
– Libanona : fitsidihana tsy nampoizina nataon'i Condoleeza Rice